Ganacsade Kenyaati ah oo loo xiray inuu u gudbo Soomaaliya si sharci darro ah – Balcad.com Teyteyleey
Ganacsade Kenyaati ah oo loo xiray inuu u gudbo Soomaaliya si sharci darro ah
Ganacsade ayaa Talaadadii lagu xukumay lix bilood ka dib markii uu qirtay inuu dambi galay inuu u gudbo Soomaaliya si sharci daro ah, Ganacsadahaan ayaa xabsiga ka badbaadi kara haddii uu bixiyo 100,000 oo ganaax ah.
Mr Samuel Omondi Otieno, oo ah 30-jir, oo kas soo muuqday Maxkamada Mandheera, ayaa qirtay dambiga ah inuu isku dayay inuu ka baxo Kenya iyada oo loo marayo qodob sharci darro ah.
Xildhibaan Kennedy Amwayi, oo ah taliyaha Gobolka, ayaa sheegay in eedaysanuhu marar badan ka soo galay Soomaaliya iyada oo loo marayo qodob sharci darro ah, Booliiskuna wuxuu daba socdayninkaasi.
“Qofka la soo eedeeyay waxaa loo arkay in uu Soomaaliya u galo si khaas ah, warbixintana waxaa loo gudbiyay Booliska ayaana xiray isaga oo u socdaalay magaalada Mandheera” ayuu yiri Taliyaha Gobolka .
Mr Amwayi wuxuu ku dooday inkasta oo raashin lagu soo iibiyay iyo walxaha alaabada loo adeegsado laga soo bilaabo magaalada Mandheera ee loo yaqaan “Bulahawa” iyo meel ka baxsan, haddana ma helin dukumiinti sharci ah oo u ogolaanaya inuu galo Soomaaliya.
“Tuhmane wuxuu dalbaday su’aalo ku saabsan inuu la shaqeeyay dhowr hay’adood oo aan dowli ahayn oo ay ka mid yihiin Hay’adda Cuntada Beeraha (FAO), WFP iyo Trocare, laakiin ma bixin karayn heshiis qoraal ah si loo caddeeyo,” ayuu yiri Mr Amwayi.
Mr. Otieno, oo ka yimid Oyugis ee gobolka Siaya, ayaa maxkamada u sheegay inuu la shaqeynayay dhowr hay’adood oo NGO ah oo Soomaaliya ku sugan sida ilaalo iyo marar uu iibsaday qalabkii ganacsiga ee Mandheera.
“Waxaan oggolaaday in aan u gudbo Soomaaliya kadib markii ay NGO-yadaas i soo wajahday sababta oo ah shaqo la’aanta aan dib ugu laabaneynin markii aan u baahday inaan quudiyo iyo iskuulkeyga qoyskayga,” ayuu ku yiri Mr Otieno.
Wuxuu sheegay inuu ka ganacsan jiray saldhigyo saaxiibtinimo oo ay la leeyihiin Soomaaliya isla markaana aan u baahnayn in la raadiyo caddaynta socdaalka ee xuduudda.
Inkastoo xukunka lagu soo oogay, Garsooraha Deegaankaas Dancun Mtai ayaa sheegay in maxkamad ay tixgelisay dhimistii Otieno iyo naxariistiisa, laakiin dembiyada loo baahan yahay in laga digtoonaado.
Waxaan ku eedeynayaa qofka la soo eedeeyay inuu bixiyo ganaax ah 100,000 oo shilin si loogu adeego lix bilood oo xabsi ah” ayuu yiri Mr Mtai.
The post Ganacsade Kenyaati ah oo loo xiray inuu u gudbo Soomaaliya si sharci darro ah appeared first on Ilwareed Online.
Madax ka tirsan Dowladaha Soomaaliya iyo Qadar oo ka wadahadlay arrimo muhiim ah
UNHCR oo Warbixin ka soo saartay Qaxootiga Soomaaliyeed ee dib u soo noqonaya sanadkaan.